E-akwụkwọ SEO na Ahịa ị nwere ike ịgụ na gam akporo gị ECommerce ozi ọma
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmụ ntakịrị ihe gbasara ọnọdụ njin nchọta na ntanetị n'ịntanetị, mgbe ahụ, anyị na-ekekọrịta di na nwunye nke E-akwụkwọ SEO na Ahịa na ị nwere ike ịgụ na ekwentị gam akporo gị. Ha niile dị na Storelọ Ahịa Play ma o doro anya na ha ga-akwụ ụgwọ.
1 Ntuziaka SEO
2 3.0 Marketing
3 Atụmatụ ịzụ ahịa dijitalụ gị n'ime otu izu
4 Social SEO
Nke a bụ a SEO e-Book Ọ bụ ezie na ọ na-elekwasị anya na ọnọdụ njin ọchụchọ, ọ na-ekwukwa mkpa ọ dị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị maka azụmaahịa ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla. Ha na-ekwu maka atụmatụ dị iche iche, njikọ njikọ, yana omume dịgasị iche iche iji mee ka ngosipụta nke ika ahụ na nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Nke a bụ a e-akwụkwọ na ahịa nke ahụ na-adọrọ mmasị ọ bụghị naanị maka ọdịnaya ya, mana maka onye dere ya. A na-ewere Philip Kotler dị ka nna nke ahịa ọgbara ọhụrụ ma bụrụkwa onye edemede nke akwụkwọ ndị dị mkpa na isiokwu a. N'ime aha a, ọ na-ekwu maka otu ụlọ ọrụ ndị kachasị emetụta si adọta ndị ahịa site na ịre ahịa dabere na uru.
Atụmatụ ịzụ ahịa dijitalụ gị n'ime otu izu
Ọ bụkwa ọzọ e-akwụkwọ nke na-ekwu maka ịzụ ahịa dijitalụ na ọ kachasị egosipụtara dị ka ngwa ọrụ magburu onwe ya iji ghọta ọrụ nke ahịa dijitalụ ọhụrụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ na-akụzikwa otu esi etinye ahịa ọhụrụ a na obere ụlọ ọrụ buru ibu, yana otu esi ejikwa usoro iji gbanwee ha ka ha bụrụ azụmaahịa.
N'ikpeazụ, nke a bụ akwụkwọ ntanetị nke na-ekwu maka ụdị ọnọdụ njin ọchụchọ na-agbanwe maka nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Akwụkwọ a gụnyere isiokwu dịka mmetụta nke Google Plus, Facebook, Twitter, Pinterest, wdg,. na SEO, njikarịcha nke ihe mmekọrịta mmadụ na SEO, Social Analytics, Ngwaọrụ na ịba uru maka ire ahịa, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » E-akwụkwọ SEO na Ahịa ị nwere ike ịgụ na gam akporo gị
imewe weebụ na seo dijo
ekele maka ndụmọdụ ndị ahụ, m ga-achọ ha
Zaghachi imewe weebụ na seo
KOOOMO, Ecommerce Platform maka Mmekọrịta Mba Nile